*လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ် + လက်ဗွေရာ
*စွမ်းရည်- 14"-15" လက်ပ်တော့များ
*အပေါက်များ- နောက်ဘက်တွင် အပေါက် ၄ပေါက်
*အသုံးပြုနိုင်သော မြင်ကွင်း- ဟိုတယ်အခန်း/ ရုံးခန်း/ အိပ်ခန်း/ စာကျက်ခန်း/ ဧည့်ခန်း
မော်ဒယ် ပြင်ပအရွယ်အစား(mm) ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) N.W(ကီလို)
ဇ ဒဗလျူ ဃ ဇ ဒဗလျူ ဃ
EF-TOP-JH ၁၃၀ ၃၈၀ ၃၅၀ ၂၀၀ ၄၃၀ ၄၁၀ ၁၂
၁။ ထိပ်ဖွင့်အံဆွဲ လုံခြုံရေး လုံခြုံသည်။
၂။ Tအိုကေ မျက်နှာပြင် ကီးဘုတ်အပြာရောင်အလင်း။
၃။ အနက်ရောင် crystal tempered မှန်တံခါး။
၄။ လက်ဗွေလော့ခ်နှင့် ဂဏန်းစကားဝှက်။
၅။ အောက်ခြေတွင် အပေါက် ၄ပေါက်ရှိသည်။
A- အများအားဖြင့်တော့ ယူမယ်။ 25-45 ရက်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းအပြီးသတ်ရန်, ဒါပေမယ့်တခါတရံမှာအော်ဒါအရေအတွက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအရွယ်အစားပေါ် မူတည်.
2.Q သင်သည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလား။
3.Q မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
2.ကျွန်ုပ်တို့ OEM ကိုထောက်ခံပါတယ်။& ODM ဝန်ဆောင်မှု။
3.ကျွန်ုပ်တို့ CE, ROSH, FCC အောင်မြင်ပြီးပါပြီ။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။